Tenga Yako Spot: Iyo YeMahara Deals App Yakavakirwa Mutengi | Martech Zone
China, July 24, 2014 Chitatu, July 23, 2014 Douglas Karr
Nharembozha mibairo, nharembozha, makombi efoni, maemail… zvese izvi maapplication zvine chinhu chimwe chakafanana. Iwo ese mapush ekushandisa anogara achigunun'una mutengi kuti ashandise kushambadza kunoendeswa kwavari. Izvo zvakanaka kune vamwe vatengi, asi vatengi vazhinji vanongoda kutora mukana wezviitiko pavanenge vakagadzirira. Ndiyo pfungwa iri kumashure Tenga Nzvimbo Yako.
Ini ndinotenda zano riri kuseri kwechikumbiro ichi nekuti rinopa mushandisi simba pane iro chikuva kana mutengesi. Mutengi anogona kufona mumarongero evatengesi avanoda kuteedzera uyezve kana vachishuvira kana pavanoda kupihwa kupihwa. Zvakanakisisa pane zvese - hapana chikonzero chekudhinda makuponi, ingo ratidza voucha mbozhanhare pa Checkout.
Vatengesi vanongobhadhara mubhadharo wepamwedzi pane kuwana mugove wemari. Sezvo madhiri ako achipinda muShop Yako Spot application, haufanire kuedza kutyaira vashandisi kurodha pasi chikumbiro chako. Izvi zvinoreva kuti iwe unokwanisa kuwana kune wese Mutengi Wako Spot mushandisi… kwete chete vanhu vaunosundira kusaina. Mhepo inokwira inomutsa zvikepe zvese! Vatengi vanongotora iyo Tenga Yako Spot mbozhanhare app uye vanokwanisa kuwana kwese kwavanofarira nzvimbo dzekutengesa uye madhiri avanopa.
Vatengesi vanogona kubata kwavo kuwanda kwezvibvumirano, kuvapa ivo munguva chaiyo-nguva, uye kugovana madhiri matsva ipapo pasina kudikanwa kwekubvumidzwa kana kugadziriswa senge mamwe mapuratifomu anoda. Zvakare, vatengesi vanogona kuteedzera kufambira mberi kwavo kwese ne analytics iyo inoyera chiyero uye data rekudzikinura. Kana iwe uri mutengesi uye uchida kutora Shop Yako Spot yekuyedza drive - shandisa pano.
Tags: zveefanzvimbo-yakavakirwanzvimbo ineMobile Anwendungmafoni couponsnharembozhanharembozhamadhiri epedyotenga nzvimbo yako